7 Nzira Dzakakwana DAM Inogona Kukwidziridza Brand Yako Kuita | Martech Zone
Kana zvasvika pakuchengeta uye kuronga zvemukati, kune akati wandei mhinduro kunze uko- funga zvemukati manejimendi masisitimu (CMS) kana faira yekubata masevhisi (seDropbox). Digital Asset Management (dhamu) inoshanda pamwe chete nemhando idzi dzemhinduro-asi inotora nzira yakasiyana kune zviri mukati.
Sarudzo seBhokisi, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, nezvimwe .., zvinonyanya kuita senge nyore nzvimbo dzekupaka dzekupedzisira, end-state assets; havatsigire maitiro ese ekumusoro anoenda mukugadzira, kuongorora, uye kutonga izvo zvinhu.
Pane zve DAM vs CMS - iwo masisitimu akasiyana anoita mabasa akasiyana zvakanyanya mumasangano ekushambadzira. Nepo CMS ichikubatsira kubata zvirimo zvewebhusaiti yako uye zvimwe zvivakwa zvedhijitari senge mabloggi, mapeji ekumhara, uye mamicrosites, DAM, kune rimwe divi, yakagadziridzwa kubata kugadzirwa kwemukati, manejimendi, uye kuendesa mukati mehupenyu hwese hwemukati uye pane zvese. channels. MaDAM anotsigirawo akawanda emhando yemhando, kusanganisira vhidhiyo, 3D, odhiyo, uye ari kubuda emukati mhando, achiita seine simba, imwe sosi yechokwadi yezvese zvirimo muchikwata chako mukati merwendo rwevatengi.
1. Mashandisiro aungaita DAM Kuti Adopt Modular Content Strategies
NeDAM seyako yepakati repository, iwe unobvumira kudzora kwakazara kwezvemukati mako, kusanganisira kuchinjika kusanganisa uye kuenzanisa zvinhu zvemukati mabhureki, misika, matunhu, chiteshi, nezvimwe. Kupwanya zvemukati kuita zvidiki, zvinogonekazve modular zvemukati - muzvinyorwa zvemukati, seti, uye zviitiko - zvinopa zvikwata kugona uye kuchinjika kune zvakanyanya uye zvine simba kushandisa zvakabvumidzwa zvemukati kuendesa zvinobata, zvinoenderana, uye zvemunhu zvemukati nekukurumidza mune chero nzira vatengi vavo. vari mukati.
Ndichiri kushandisa modular content strategy zvichawedzera kuwedzera huwandu hwezvinhu zviri mukati meDAM, kune metadata optimization nzira, senge metadata nhaka, iyo inogona kubatsira kurerutsa uye otomatiki zvimwe zvinhu zvekutonga modular zvirimo.
Zvakakosha kuziva kuti DAM inogona kuita basa rakakosha mumaitiro emodular content nekutsigira zvirimo zvine chekuita nenjodzi uye kutevedzera manejimendi, sezvidziviriro, kuburitswa, zviratidzo, nezvimwewo. MaDAM anogonawo kutonga zvirimo kutsigira mitemo yakatenderedza usability, semuenzaniso, sei zvemukati zvinofanirwa kana kusafanirwa kushandiswa kana kusanganiswa kune vamwe vateereri, chiteshi, kana matunhu.
Chekupedzisira, mubairo wakakura wekuve nezvese modular zvemukati zvakaiswa pakati peDAM ndeyekuti zvinokutendera iwe kuti unzwisise kuti uye kupi zvinyorwa zviri kushandiswa uye kushandiswazve, zvichikupa ruzivo rwunoita mukuita kwemukati, ndezvipi zvemukati zvakashanda zvakanyanya kune chimwe chiitiko, kana zvemukati zvinoda kuchinjwa kana kuregeredzwa, nezvimwe zvakawanda.
2. Maitiro eDAM Inogonesa Zvirinani Zvemukati Kusarudzika
Muzera ranhasi redhijitari, zvirimo ndiyo nhaurirano iyo mabhureki ane vatengi vavo. Isu, sevatengi, tinosarudza mhando zvichienderana neruzivo rwedu nerudzi irworwo: kutiziva sei, manzwisisiro ainotiita, kuti rinoenderana sei patinosangana naro, uye kuti zviri nyore uye zvakakosha sei kuhupenyu hwedu.
Asi kuendesa izvo zvemunhu zviitiko zvevatengi pakusangana kwese hakusi nyore uye zvinogona kutora zvakakosha zviwanikwa nenguva. Ndipo panopinda nheyo yenheyo senge Aprimo.
Kubudirira kwemunhu kunotanga nekugadzirwa kwakanaka kwekugadzira uye chirongwa chemukati chekutsigira munhu pachiyero. Aprimo haingoshande semusana wezvese zvemukati mashandiro ako, kutonga uye kuronga ese ega ega zvinhu zvinoumba yega yega chiitiko chemukati, asi zvakare inogonesa mazano senge modular zvemukati, uko kugadzira uye zvemukati zvikwata zvinogona kukurumidza uye nyore kugadzira, kuwana, kushandira pamwe. , govana, uye shandisazve zvirimo kuyera ruzivo rwevatengi uye hunhu uye kutyaira zvakanyanya kushanda zvakanaka.
Aprimo's Smart Yemukati Yemunhu ficha inoita kuti iwe utumire otomatiki mametadata-akafumisa ma tag kumainjini emunhu anogona kuenderana nezvirimo nekurudyi, kunanga munhu. Kuburikidza neSalesforce neAprimo zvinongedzo, iwe unopihwa simba rekuita nevatengi vako mumatanho ese, kugadzirisa munhu nehungwaru, uye kuve nezvirimo uye mutengi wako anotyaira maitiro ekushambadzira zvemukati. Uye features like zviratidzo mukati brand templates inogona kutozadza otomatiki ruzivo rwemutengi, senge ruzivo rwekufonera, kuti uwedzere kugadzirisa uye kugadzira zvirinani mutengi ruzivo.
3. Mashandisiro aungaita DAM Kuti Uve nechokwadi chekuti Airtight Compliance
Makambani anogadzira zvizhinji zvemukati uye kugadzirisa njodzi inosanganisirwa neiyo zvirimo inzira yakaoma. Pasina DAM, zvirimo uye mafambiro ebasa anowanzo kuvharirwa mumadhipatimendi akasiyana uye maturusi, zvichiwedzera kuoma kusingakoshi uye njodzi inogona kutungamira kumafaindi akakura kubva kumatare anodzora. Kurerutsa izvo handoffs uye mapoinzi ekubatanidza zvinogona kuchengetedza nguva nemari uye kuwedzera kukurumidza kumusika.
Kuvhara mabhesi ese, kunyanya kune ayo ari zvakanyanya kudzora uye akasarudzika maindasitiri senge upenyu sciences kana masevhisi emari, iwe unoda imwechete sosi yechokwadi yekuvandudza ese ari maviri ekutonga kutevedza wongororo uye kuburitsa manejimendi, humbowo hunotsigira, uye kubata zvirinani zvese zvedhijitari. Mushure mezvose, zvirimo zvako zvakangonaka sekutevedzwa kwazvinoitwa, kutungamirirwa, kuongororwa, uye kuchengetwa.
Nekubatanidza simba reAprimo uye kutevedzera mhinduro matekinoroji, masangano anogona kuendesa yakakwana, yekupedzisira-ku-kuguma maitiro inovabvumira kuti vawane kuburikidza-mutsara traceability yezvinyorwa zvinodikanwa kupindura kubvunzurudzo yemutemo, kuderedza njodzi yefaindi dzinodhura, uye kuchengetedza mukurumbira wavo wemhando-nguva yese vachiendesa yakasarudzika. ruzivo uye kuderedza nguva yekutengesa.
4. Mashandiro eDAM Anobatsira Brand Consistency Mumitauro Yese uye Matunhu
Hazvina kukwana kungoendesa pa-brand, zvinoenderana nezvirimo. Mabhengi anofanirwawo kuve nechokwadi chekuti izvo zvirimo zvinogovaniswa nemutengi akakodzera - chikamu chakakosha che - chiitiko chakanaka chechiratidzo.
Izvi zvinoreva kuti mabhureki anofanirwa kuve nechokwadi chekuti midziyo yakakodzera inoshandiswa mumushandirapamwe wega wega uye chiteshi, kunyanya kana uchibatanidza zvirimo mumitauro nematunhu akasiyana. Apa ndipo panouya mhinduro dzakaita senge madhairekitori emhando, brand portals, uye brand templates dzinouya zvinobatsira. Aya maficha anobvumira zvikwata zvese, zvemukati nekunze (funga masangano kana vadyidzani), kuti nyore uye nekukurumidza kurodha ese akatenderwa uye ari-kusvika-zuva ekutumira mameseji nhungamiro, marogo, mafonti, midziyo, uye nezvimwe zvine zvakananga zvinongedzo muDAM yako kuti zvishandiswe mukati mese. nzira, matunhu nemitauro. Izvi zvinoreva kuti asset yeUS inogona kugadziridzwa zviri nyore uye nekukurumidza uye kuendeswa mumusika weUK pasina kuda yakawedzerwa rutsigiro rwekugadzira.
Semuenzaniso, fungidzira uchangopedza mushandirapamwe wekuzivisa muUS uyo wakabudirira zvisingaite, uye vatengesi vedunhu vakati wandei vava kuda kuita mushandirapamwe wakafanana. Uchishandisa DAM yako, unogona kuita kuti zvinhu zvese zvemushandirapamwe uyu zviwanikwe kune zvikwata izvozvo uchiziva kuti matemplate, zvirimo, dhizaini, logo, mifananidzo, vhidhiyo, uye nezvimwe zvinotenderwa, zvechizvino-zvino, uye zvinoenderana zvizere.
5. DAM Inobatsira Sei Matimu Ako Akagadzira
Haisi chete iyo DAM yako inogona kubatsira nekuenderana kwemhando mumisika dzakasiyana, asi zvakare inogona kubatsira kudzivirira ekugadzira mabhodhoro nekudzorera nguva kune ako ekugadzira uye ekugadzira zvikwata kuti atarise pamapurojekiti emhando yepamusoro.
NeDAM, zvikwata zvekugadzira zvinogona kukurumidza uye nyore kugadzira, kutonga, uye kuendesa zvirimo neraibhurari yese yemodular assets izvo zvese zvinotenderwa, pa-brand, uye zvinoenderana. Vanogonawo kugadzira matemplate emhando yevashandisi vasiri vekugadzira kuti vatore zvemukati zvekushandisa mumisika dzakasiyana. Mhinduro senge Aprimo inogona zvakare kushandisa AI-inotyairwa otomatiki kukwenenzvera kugadzira mafambiro, kubatirana, ongororo, uye kubvumidza kuti zvikwata izvozvo zvitarise tarenda razvo nenguva pakugadzira zvemhando yepamusoro-soro pachiyero panzvimbo yekubatikana nemabasa emazuva ose.
Mhedzisiro yezvese izvi idhipatimendi uye kambani-yakaenderana neiyo imwechete sosi yechokwadi, ipfupi nguva yekutenderera, uye chaiyo-nguva kuoneka mune izvo zviri kuita uye dzokera pakushanda nesimba (ROE) kuitira kuti uite sarudzo dzine ruzivo kana zvasvika pakuunza yakasarudzika madhijitari zviitiko zvinotarisirwa nevatengi.
6. Maitiro ekugadzirisa DAM yako kune maAgency, Channel Partners, Distributors, uye vamwe vechitatu-bato
Sezvambotaurwa, pachinzvimbo chesiled zvemukati repositori uye workflows kune akasiyana maapplication, Aprimo inokwenenzvera iyo yese yekugadzira zvemukati maitiro, kubva pakugadzira uye wongororo kusvika pakugovera uye kupera - zvese munzvimbo imwechete. Iyo zvakare inorerutsa kuchengetedza kwezvinhu zvako, zvichikubvumidza kuti uwane nyore, kutsiva, kana kuchengetedza zvemukati, uye kudzivirira zvakapetwa zveasiti imwe chete.
Izvi zvinoreva kuti hapasisina Dropbox neGoogle Drive-kunyangwe kana zvasvika pakubatana nevakakosha vane chekuita kunze kwesangano rako. NeDAM, unogona kupa masangano ekunze nevashambadziri vanodzora kuwana kumidziyo yavanoda, uye kunyange kugovera zvinyorwa zvitsva zvakaiswa neimwe agency neimwe kuti ishandise zvakare zvirimo nekukurumidza.
Zvinhu zvakaita se public Content Delivery Network (CDN) zvinongedzo zvinoreva kuti hausi iwe chete unoita shuwa kuti ichangoburwa vhezheni yezvinyorwa zvako ndiyo iri kushandiswa, asi iwe zvakare unobatsirwa kubva nekukurumidza kurodha nguva uye otomatiki shanduro dzemidziyo yako chero kwadziri kuiswa, senge muCMS yako.
Iwe unogona zvakare kuchengetedza zviri nyore kuenderana kwemhando nekupa nhungamiro yemhando, matemplate, uye zvinhu zvakatenderwa kuti masangano atengese zvirimo nekukurumidza, aine maficha senge akasiyana ekurodha sarudzo uye otomatiki zvirimwa zvekushandisa mumatanho akasiyana emagariro.
7. Iyo Yakarurama DAM Inogonesa sei CMS-Agnostic Content Operations
Haasi ese maDAM akagadzirwa akaenzana. Kunyange paine mapuratifomu eCMS anopa DAM, ingori chinhu chimwe chemhinduro hombe- pamwe kunyangwe bhaudhi-pane mhinduro kubva kuchangobva kuwanikwa. Aya epuratifomu maDAM anoita seakareruka ekuchengetedza midziyo yekupedzisira uye haape simba, kugona, uye kuchinjika kunodiwa kuti ushande nemazvo mukati memusanganiswa we ecosystem iri kuramba ichishanduka.
Munyika yanhasi yakaoma yedhijitari, hazvigoneke kuti mabhureki aenzanise zvizere nemutengesi mumwechete kune yavo yese omnichannel stack. Naizvozvo, kana uchisarudza DAM, iwe unofanirwa kunge uchitsvaga mhinduro iri CMS-agnostic uye inogona kushanda seyako yepasirese yemukati injini nekubatanidzwa kune akawanda ezasi mhinduro. Iine yakanakisa-ye-kubereka DAM, unogona-remangwana-humbowo sangano rako nekuzvimiririra kukura bhizinesi rako kuita chiteshi chitsva, kuburikidza nekuwedzera uye yakavhurika yekubatanidza.
DAM yako inofanirwa kukwanisa kushandira omnichannel zvinodiwa pane chero CMS, akawanda maCMS akafanana, uye angangoita chero mhando yechiteshi uye ecosystem kumisikidzwa. Iyo inova iyo yepasirese yemukati injini, yakazvimirira pane chero shanduko yaunoita kuCMS yako pasi pemugwagwa. Panzvimbo pekuvimba neseti yezvidziviriro yezvishandiso zvinongowanzo "kutaura" nemumwe, iyo yakazvimirira DAM, yakavakirwa pane inoumbwa yemukati zvivakwa, inokupa iwe kugona kushanda zviri nyore mukati meakasiyana ecosystem kuitira kuti iwe ugone kukurumidzira nguva yekushambadzira uye kutendeuka. , uye tora kutonga pamusoro penzira yaunofambisa nayo brand yako kumberi.
Yemahara Aprimo DAM Muedzo
Tags: aiaprimochakagadzirwa njereassetsset managementAudiobhokisimuchisomuchiso kutevedzerabrand termplatesCdncmscms-agnostickutevedzeraongororo dzekutevedzerakutevedzera mhinduro matekinorojicomposablecomposable architecturecontent delivery networkmashandiro emukaticontent personalizationcontent strategieszviratidzo zvemukatimhando dzemukatigadzira zvemukatizvisikwa zvekugadziradhamudhamu remasanganodhamu revanodyidzana nechiteshidhamu revanogoveradhamu vs cmsgovera zvirimodigitaalinen aseti manejimendikuburitsa manejimendiDropboxgeographic asset managementGoogle Driveupenyu sciencesmaneja zvirimomodular content strategymitauro yakawandaPersonalizationdzokera pakushanda nesimbasharepointzviratidzo
SaChief Marketing Officer, Ed Breault ndiye ane basa Aprimo's brand uye kukura. Anotyaira sangano reB2B SaaS kuenda-kumusika kumberi neayo Digital Asset Management uye Marketing Resource Management zvikamu. Anosanganisa kukura kwekushambadzira hunyanzvi neyakakura kumashure mukuvandudza brand uye chido chekugadzira account-based marketing zvirongwa zvinovaka kuziva, kusiyanisa, kudiwa, uye pakupedzisira mari.